Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » New York gaa Madeira. Ụgbọ elu ga-eme ozugbo
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A ga-eji ụgbọ elu SATA Azores ụgbọ elu dị n'etiti New York (JFK) gaa Funchal (FUN) kwa izu, na-enye ndị njem na-achọ ịchọpụta ihe bara nnukwu uru nke Europe.
Ụgbọ elu 1.SATA Azores, ga-ebufe ụgbọ elu na-anaghị akwụsị akwụsị site na New York (JFK) na Funchal, Madeira.
2.Enweghị ihe mgbochi maka ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi zuru oke si US ileta agwaetiti Madeira.
3. Ụgbọ elu kpọmkwem kwa izu ga-adị ruo Maachị 2022
Na Nọvemba 29, 2021, Inovtravel na mmekorita ya na ụgbọ elu SATA Azores, ga-ebufe ụgbọ elu anaghị akwụsị akwụsị site n'ọnụ ụzọ US gaa Funchal, isi obodo Madeira. Na njikọ ụgbọ elu ọhụrụ ahụ kpọmkwem, na-arụ ọrụ site na New York (JFK) gaa Funchal (FUN), onye na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Portugal. Mmegharị njem ulo oru ọhụrụ njem ngwugwu gaa Madeira, nke ga-agụnye ụgbọ elu na-aga na New York, ebe obibi, nnyefe ọdụ ụgbọ elu-hotel na ọkachamara njem.
Madeira, nke dị n'àgwàetiti dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri Portugal, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ nnukwu nkume zoro ezo nke Europe, nke nwere ọmarịcha ọmarịcha ugwu, ndagwurugwu na osimiri dị kilomita 300, yana ebe obibi kpakpando ise, ụlọ nri Michelin nwere kpakpando, na Madeiran na-enweta ihe nrite. mmanya . Ọbụghị naanị nke ahụ, mana agwaetiti ahụ nwere njikọ akụkọ ihe mere eme pụrụ iche na US, ebe aha ya bụ Madeira mmanya na-eji mee ka nkwupụta nnwere onwe na 1776 na Thomas Jefferson boro ebubo na ọ na-enye iwu ihe ruru karama mmanya Madeira 3,500 n'ime afọ ole na ole mbụ ya. nke onyeisi oche. Ugbu a, site na ịdị mma nke nhọrọ ụgbọ elu anaghị akwụsị akwụsị, paradaịs Portuguese a na-enweta ndị njem US karịa mgbe ọ bụla.
"Obi dị anyị ụtọ ịnabata ụgbọ elu ọhụrụ sitere na New York City gaa Madeira na Nọvemba a wee gbasaa ọnụnọ anyị na ahịa US," Onye odeakwụkwọ mpaghara maka njem nlegharị anya na ọdịbendị nke Madeira, Eduardo Jesus kwuru. "Site na nhọrọ ụgbọ elu enwere ike ịnweta site na njem njem US dị iche iche, anyị na-anụ ọkụ n'obi ịnabata ndị njem US n'ọnwa na-abịa na paradaịs Madeira."
Ụgbọ elu kwa izu ga-adị site na Machị 2022 ma ndị njem nwere ike ịdebanye aha site na Inovtravel.com. Ọnụ ahịa na-amalite na $1,050 njem okirikiri maka oche akụ na ụba yana njem $1,880 maka oche klaasị azụmahịa, gụnyere ụtụ isi niile. Ngwunye njem Innovtravel na Madeira na-amalite na $999 gụnyere ụgbọ elu.
"Ebumnuche anyị bụ ịnọgide na-enye ndị njem US ọtụtụ nhọrọ na-achọ ịgbapụ gaa n'agwaetiti ndị mara mma nke Madeira site na ụzọ ụgbọ elu ọhụrụ na nke dabara adaba na ngwugwu njem dị iche iche nke enwere ike ịhazi ya ka ọ dabara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmefu ego ọ bụla," ka Inovtravel Onye guzobere na kwuru. Onye isi ala Luis Nunes.
Agwaetiti Madeira ghere oghe maka ndị njem nlegharị anya US, na-enweghị mmachi ma ọ bụ nnwale maka ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi. Iji hụ na nchekwa nke ndị obodo na ndị ọbịa, ndị njem niile na-aga Madeira ga-emecha a Ụdị dị n'ịntanetị nke Madeira Safe n'ime awa 48 tupu ịpụ. Ndị njem na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike iji ule COVID-19 PCR na-adịghị mma mee njem na Madeira n'ime awa 72 tupu ha erute, ma ọ bụ site na ịme ule COVID-19 n'efu mgbe ha rutere. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ntinye Madeira ga-aga Gaa na Madeira.pt.